Na ny lehilahy ihany koa aza dia mba mila an’io fotoana io, hampientanentana azy tsara. Afaka miasa daholo ny faitry ny vatana iray manontolo, mandritra io fotoana io, hanainga ny filàna sy hitondra fahafinaretana. Fa andao andramana indray ny tsy mampiasa tanana mihitsy. Mety ho fahafinaretana hafakely ihany koa no ho tsapa !
Safosafoy amin’ny volo izy
Maro ny lehilahy no tia vehivavy lava volo. Afaka mandray anjara manontolo ao anatin’ny kilalaom-pitia mantsy ny volo, izay azony sintonina, ohatra. Fa azo entina manafosafo ny vatan’ilay lehilahy manontolo ihany koa ny volo, mandritra ny savaranonando. Andramo ange e ! Manitikitika mahafinaritra !
Kitikitiho ny sofiny
Ivon’ny fahafinaretana tsy hita noanoa ihany koa ny sofina. Lelafo ny ao anatiny dia kitikitiho amin’ny lela, tsentsafo ilay raviny iny, adalao amin’ny molotra sy ny lela ny manodidina azy manontolo… Ho hitanao ny fiakatry ny hafanany !
Omeo oroka tsy ho adinony izy
Tsy misy zavatra mahalasa adala ny lehilahy toy ny oroka lalina ! Ankafizinao ny manafosafo azy amin’ny lelanao, manaikitra moramora ny molony… dia ho hitanao !
Mandihiza eo anoloany
Nofinofim-pilàna mampiakatra haingana ny mari-panan’ny lehilahy ihany koa, ny vehivavy miolanolana mandihy eo alohany. Toa any anaty horonan-tsarimihetsika ihany no tena ahitana an’izany, ka hevero ange rehefa tena ianao olon-tiany mihitsy no hitany sy azony tsapain-tanana manolanolana ny vatanao mandrangitra azy…
Tsikaritrao ve ny ataon’ny vehivavy sasany mba hambaboana ny lehilahy ? Mitsentsitra “bonbon sucette” izy, lelafiny, ahodinkodiny ao am-bavany, arahiny fihetsiky ny maso izay maneho fahafinaretana tsisy ohatr’izany... Eo anoloan’ilay olon-tianao mihitsy no manaova toy izany koa. Azo asolo ny vatomamy ihany koa ny akondro !